Taladayada dhawaaqa ah ee loogu talagalay Jimcaha Madow 2019 | War gadget
Miguel Hernández | | Amazon, Dhacdooyinka, General
Jimcaha Madow ee sanadkan 2019 waa ku dhowaad geeska, si kastaba ha noqotee, dalabyada ayaa imanaya waqti kasta ka hor si ay u bixiyaan qiimo dhimis ballaaran oo ku saabsan alaabooyinka aan muddo dheer baareynay. Sida Sannadkan marka la joogo Actualidad Gadget waxaan dooneynaa inaan kaa caawinno in ka badan sidii hore, waxa aan sameyn doonno waa isku-dubbarid kooban oo ka mid ah dalabyada ugu fiican ee aan kuu hayno, taas oo aad ka heli doontid samaacado sameecado, sameecado caqli badan iyo wax walba oo yar. Nala garo annaga kuwaas oo ah dalabyada ugu xiisaha badan ee dhawaqa ah ee Jimcadan Madoow oo ka faa'iideyso fursad aad ku cusboonaysiiso alaabadaada qiimaha ugu fiican.
1 Kygo A11 / 800 - Sameecadaha dhagaha leh ee ANC
2 Sonos Move - Afhayeenka oo dhan
3 Gudoomiyaha Baarlamaanka Smart wake wake up - saacada digniinta oo leh Alexa
4 Sameecadaha dhagaha ee lagu ordo oo kala duwan
5 Dhagaha dhabta ah ee wireless-ka (TWS)
Kygo A11 / 800 - Sameecadaha dhagaha leh ee ANC
Waxaan ku bilownay badeecad caan ah oo sii kordheysa, dhawaaqa maqalka dhagaha. Waxaan ku faraxsanahay inaan tijaabinno Kygo A11 / 800 dhowr toddobaad ka hor. Falanqayntayada waxaan ku helnay qiimo aad u wanaagsan lacag ahaan xagga sheyga, Waxaan leenahay madax-bannaanida aad u wanaagsan ee dhagaha la galiyo oo lagu dalaco isku xirka USB-C oo leh kiis qaad oo sanduuqa lagu soo daro, in kasta oo ay taasi gebi ahaanba la laaban karaan, sidaa darteed waxay qabsanayaan meel yar oo aan dooneyno inaan ku keydinno. Waxaan leenahay guddi taabasho oo loogu talagalay xakamaynta multimedia iyo sidoo kale isku xirnaanta xarka 3,5mm ee maqalka analogga ah
Iibso Kygo A11 / 800
Tikniyoolajiyadda Bluetooth waa nooca 5.0 sidee bay noqon kartaa haddii kale qaabeynta ayaa si buuxda otomaatig ah. Nofeembar 28-keeda iyo illaa Nofeembar 30 oo ku beegan Jimcaha Madow, sameecadaha dhagaha ayaa wax laga dhimayaa 50% dukaanka rasmiga ah ee Kygo, sidaas waxay joogi doonaan € 150 oo ay ku jiraan rarka, qiimo dhimis xoog leh oo ka faa'iideysanaya taariikhahaas gaarka ah. Xusuusnow in sameecadaha dhagaha la gadan karo labada cad iyo madow iyo inay leedahay makarafoon laba jibbaar ah si ay si fudud uga jawaabto wicitaanada.
Sonos Move - Afhayeenka oo dhan
Sonos Move waa afhayeen gaar ah, oo ah kii ugu horreeyay ee ku hadla Bluetooth ee shirkadda Iswidhishka sidoo kale leh inta ka hartay astaamaha Sonos, sida: Ku xirnaanta Amazon Alexa iyo Google Assistant, Spotify Connect, AirPlay 2, iska caabin biyo ... Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale loogu talagalay inaad si toos ah ugu dhejin karto meel kasta oo aad rabto, tan awgeed waxay leedahay dekedda USB-C iyo saldhig lacag-bixin ah oo noo oggolaan doona inaan u qaadno meeshii aan u baahanahay, in had iyo jeer lagu weheliyo awoodda lagama maarmaanka ah iyo tayada codka, sida jardiinadeenna ama xafladahayaga ugu geesinimada badan.
Iibso Sonos dhaqaaq ve 339
Intaa waxaa dheer, Sonos wuxuu diyaariyey dalabyo uruurin ah oo loogu talagalay Black Friday iyo Cyber ​​Monday:
Codbaahiyahaani wuxuu leeyahay cabbir yar oo iswaafajsan iyo culeys xaddidan marka loo eego awoodiisa. Haddii aan dul dhigno salka, waa Sonos soo jireen ah, laakiin haddii aan la soo baxno oo aan ku xirno Bluetooth waxaan leenahay afhayeen aan xad lahayn. Waxaad arki kartaa gorfeyntayada qotada dheer iyo fiidiyowgeena haddii aad rabto inaad si dhow u ogaato. Shirkada iswiidhishka waxay lahaan doontaa iibkeeda jimcaha madow ee boggeeda internetka, marka lagu daro qiimo dhimista aan ka helno taxanaha wax soo saarkooda ee lagu iibiyo Amazon.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Smart wake wake up - saacada digniinta oo leh Alexa
Miyaad qiyaasi kartaa inaad awoodi karto inaad miiskaaga sariirta dhinaceeda ka saarto xeedho-garaacaaga, saacadda alaarmiga iyo qalabka dhawaaqa? Intaas oo dhan iyo in ka badan Sistem Sistem waxay ku siineysaa Khadka tooska ah ee Smart Wake Up, afhayeenka caqliga leh ee saacadda alaarmiga ah isla mar ahaantaana saldhigga lacag la'aanta ah ee heerka Qi. Laakiin waxay leedahay waxqabadyo badan oo dheeri ah, waxaad ka faa'iideysan kartaa tiknoolajiyada Bluetooth 5.0 ama astaamaheeda Multiroom si aad ugu awoodsato inaad ku darto inta ka hartay badeecadaha kala duwan. Sidaa si la mid ah, waxaan ka helleynaa af-haye 2.0 ah oo ku filan oo in ka badan in ku filan si loo buuxiyo qol muusig ah mahadnaqa Spotify Connect.
Iibso Smart Speaker Wake up
Hadalkaani waxaa laga heli karaa Amazon iyo waliba bogga Sistem-ka Tamarta halkaasoo ay qiimo-dhimis ballaaran ku sameynayaan Jimcaha Madow ee alaabooyinka Smart Sepaker sida Hoyga 5 iyo 7 Taawar, Marnaba wax xanuun ah kuma lihi inaad eegto si aad u aragto haddii qaar ka mid ah kuwan alaabooyinka ku habboon ee Alexa ay qayb ka noqon karaan gurigaaga. Si daacadnimo ah, qiimahan wuxuu badalayaa badeecooyin faro wanaagsan oo had iyo jeer miiska saaran waxayna noqoneysaa ku dhowaad maalin lama huraan ah, maadaama ay tahay saacad alaarmi ah waxayna ku xasuusin doontaa subax walba inaad shaqada aadeyso .
Sameecadaha dhagaha ee lagu ordo oo kala duwan
Waxa aan hadda kuu keenayaa waa ururinta samaacadaha dhegaha ee orodka ama guud ahaan isboortiga, Waana taas hawsha noocan ah xaqiiqdii inaysan u qalmin nooc kasta oo sameecadaha dhagaha la gashado, sida ay macquul tahay, maadaama ay lagama maarmaan tahay in marka lagu daro qabashada dhagta wanaagsan ay leeyihiin iska caabin wanaagsan oo ku saabsan cilladaha caadiga ah ee tan nooca waxqabadka. 'Actualidad Gadget' waxaan ku falanqeynay tusaale ahaan samaacado sameecado oo fiican ah sidaa darteed waxaan kuu daynaynaa ururinta yar:
Fresh'n Mucaaradka xirka qiimo dhimis gaar ah El Corte Inglés
Tamarta Sistem Bannaanka Box Street laga bilaabo € 99,50
Ultimate Ears Boom 3, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee ka hadla wireless-ka suuqa ee qiimo dhimis fiican, wuxuu joogaa € 84,99
Dhagaha dhabta ah ee wireless-ka (TWS)
Muddooyinkan dambe dhagaha dhagaha ee TWS waa sheyga xiddigga, Actualadad Gadget waxaan sidoo kale isku daynay in yar oo ka mid ah kuwan. Waxaan rabaa inaan muujiyo marka hore TicPods Bilaash ah oo laga helo Mobvoi, sameecadaha dhagaha midabkooda madow waa 71,12 euro oo keliya taas oo ah qiimo dhimis ku dhow 50% qiimaha la bilaabay. Waxay gebi ahaanba yihiin sameecado wireless ah oo leh IPX5 iska caabin iyo xakameyn taabasho oo ka dhexeysa howlo kale oo badan, fiiri falanqeyntayada haddii aad rabto inaad wax yar ka sii ogaato.
Annaguna waanu kaa tagnay Sameecadaha dhagaha TWS in aan isku daynay baryahan dambe oo waliba qiimo dhimis leh, waa wax aad u xiiso badan marka loo eego qiimahooda.
Arbily G9: Boodhadhka Bluetooth 5.0 ee leh dhididka dhididka, in ka badan 20 saacadood oo ay ku jiraan sanduuqa wax lagu shubo, makarafoonnada iyo joojinta dhawaaqa dadban, Wax alaab ah lama helin.
Waa hagaag, tani waxay ahayd aruurintayada ku hadlayaasha yar yar iyo sameecadaha dhagaha ee Actualidad Gadget ee Jimcadan Madoow, waxaan kugula talineynaa inaad feejignaato maxaa yeelay qiimo dhimis badan ayaa imaaneysa waana sii wadi doonnaa si joogto ah ayaan u daabici doonnaa, usbuuca Jimcaha Madow ayaa la joogaa adigana waa in laga faa'iideysto. Haddii aad ogtahay dalabyo badan ama aad hayso wax su'aalo ah, ka faa'iideyso sanduuqa faallooyinka kuna soo biir kanaalkeena YouTube, oo na raac Twitter haddii aad rabto in lagugu wargeliyo wararka ugu fiican ee dhinacyada teknolojiyadda, iyo sidoo kale falanqaynta ugu dambeysa ee nooc walba leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Amazon » Taladayada dhawaaqa ah ee loogu talagalay Jimcaha Madow 2019